Mareykanka oo ogolaaday in daawada Ebola lagu dabiibo dadka qaba Coronavirus
Mogadishu - 01:20:19
Saturday May 02, 2020 - 18:21:32 in Wararka by Super Admin
New York -BBC
Hay’adda Mareykanka u qaabilsan dhanka cuntada iyo dawada ee (FDA) ayaa u fasaxday dadka qaba xanuunka Coronavirus in lagu daweyn karo kaniiniga iyo cirbadda Remdesivir ee u gaarka ah horeyna loogu daweeyay cudurka Ebola.
Laakiin waxaa keliya loo isticmaali karaa Remdesivir-ka dadka aadka ula il daran COVID-19 ee ku jira qaybta gargaarka deg degga, iyadoo dhowaan tijaabooyin caafimaad oo la sameeyay lagu ogaaday in dad la siiyay Remdesivir ay si wanaagsan uga bogsadeen Coronavirus, inkastoo weli ay socoto tijaabooyin dheeraad ah.
Laakiin khubaro caafimaad oo badan ayaa ka digaya in dawada Remdesivir oo ay sameyso shirkadda Gilead ee fadhigeedu yahay California ay keliya ugu talo gashay in lagu daweeyo Virus-ka Ebola.
Kulan gaar ah oo Madaxweyhnaha Mareykanka Donald Trump uu aqalka cad kula yeeshay madaxa shirkadda dawada sameysa ee Gilead, Daniel O’Day ayaa waxaa la isku afgartay in dawada Remdesivir loo isticmaalo Coronavirus, waxaana shirkadda Gilead ay 1.5 milyan oo daawadan ah ay ugu deeqi doontaa hay’adda cuntada iyo dawada mareykanka ee FDA.
Dadka uu ku dhacay COVID-19 ee Mareykanka ayaa kor u dhaafay 1 milyan oo qof, waxaana u dhintay 65,888 ruux, halka caalamka oo idilna uu cudurkani haleelay in ka badan 3 milyan oo qofood.